Lokhu iqhawe ngesiGreki, owafika kanye eziyikhulu ibutho senkulungwane ngaphansi izindonga Troy, futhi uye waba umlingisi emaphakathi zikaHomer sika inkondlo Iliad, kwakusekhona ukuthi kusukela kudala okweqa ukuziqhenya amadoda. Onkulunkulu generously klomela kuye ngamandla, ngesibindi, ubuhle kanye izikhulu. Wayelethwa bancishwa ukuphila kwakhe into eyodwa kuphela - injabulo.
Mortal inzalo ka abakhileyo Olympus
Mayelana ngubani lokhu Achilles siyazi kwemisebenzi abalobi abaningi basendulo, futhi elalidume kunawo wonke futhi enethonya elikhulu okuyinto kwehomere. Kusukela emakhasini inkondlo yakhe okungenakufa sifunda ukuthi onkulunkulu bamaGreki owakhiwe isiqongo seNtaba i-Olympus, esetshenziswa wehlele emhlabeni, futhi angene emshadweni nge abafayo, ngandlela-thile bafanelwe lolu dumo.
Uma ukholelwa ukuthi ezinganekwaneni zasendulo kuhlangana azalelwa kuphela abalingisi sihlanganise uhide olungapheli izinzuzo, okuwenza aqondane ngaphezu kwabo bonke abanye abantu bomhlaba, e okuphila bekhulisa oda nokuzwana. Lilodwa inkinga bancishwa ukuphelela kwabo injabulo - bazalelwa abafayo.
Indodana inkosi yasemhlabeni futhi unkulunkulukazi kolwandle
Kwenzeka isimanga ukuthi Peleus yinkosi ftiysky kanye baphendula ikhanda lonkulunkulukazi ulwandle Thetis. Wathola indlela okusekujuleni kwenhliziyo wale ntokazi, nesithelo isikhashana wakhe lobuthakathaka kwaba Achilles edume ngofuzo unina zonke izinzuzo umuntu azalwa nalo lokuhlaziya onkulunkulu, kodwa uyise wahlala ofayo.
Abafisa ukugcwalisa lokhu igebe, Thetis iye yakhetha amathuluzi ubudala futhi kungase kutholakale, ukwehlisa ke ngokushesha emva kokuzalwa emanzini oMfula i-Styx, okuyinto agelezela endaweni yabafileyo. Kusukela konke lokhu umzimba usana laligcwele i igobolondo ongabonakali kodwa kuyo, okuyinto abakwazi akuqede iyiphi izikhali. Ukukhethwa kuphela isithende, okuyiwona unina sambheka, bephonsa emanzini.
Kwaba endaweni yakhe kuphela sengozini, futhi kugcinwa kuyimfihlo. Kodwa ebheka phambili, kufanele bathi umuntu owabulala Achilles, futhi wagcina ukuphila kwakhe, naphezu kwakho konke imizamo Thetis njengoba umuntu ongelutho, wayazi ngakho. Futhi igama umbulali uzobe umemezele kuze kube sekupheleni kwendaba, ukuze zingqubuzana nemithetho uhlobo hhayi ukunciphisa ububi besimo sokuguquka esiqintini nozungu.
Abeluleki isikhulu abasha
Ngokuba imfundo ikusasa uyise hero sika wacosha abeluleki bakhe ababili. Omunye wabo kwakungu-Phoenix ubudala futhi bahlakaniphe kangakanani, owafundisa umfana imikhuba ehloniphekile, imithi kanye kwalokho izinkondlo, ngaphandle okuyinto ngalezo zinsuku zingase zidlulisele neyokungazi boor. Eyesibili waba centaur okuthiwa Chiron.
Ngokungafani esizwe ayekanye nawo - izidalwa zobuqili kunganakekile, ayevelele yi nokuvuleka nobungane. Nokho, bonke efundisa, kwaba ukuqinisekisa ukuthi wayondla Achilles 'ubuchopho bearish namabhubesi ethosiwe. Kodwa ukudla okunjalo bazuza ngokucacile kusukela umfana, futhi ihlanganisa iminyaka eyishumi ubudala wabulawa kalula ngezandla futhi yasendle ukuze uhambisane ne inyamazane.
Escape esiqhingini Skyros
Lapho kuqubuka impi, lapho amaGreki nozakwabo eziningi baphuthuma izindonga Troy, lapho imithetho Queen Helena, waqaphela owesifazane omuhle kunayo yonke isikhathi, hero yethu kwaba nanhlanu. By endleleni, lokhu ngokuningiliziwe likuvumela ukunquma ngokuthé ngqo, Achilles wahlala unyaka. Ukuqala yaseTroy neMpi mlando uphola ukuqala XIII kanye no- XII BC leminyaka, kusho ukuthi wazalwa cishe ngo-1215 BC. AD noma ngakho.
Unkulunkulukazi Thetis, naphezu kweqiniso lokuthi indodana yakhe phansi emanzini Sixx, wamenza ivuma cishe ongafi, Nokho, kungenzeka ukufa baka-Achilles. Wanquma ukuba engozini futhi awuvikele umkhankaso, lapho kwadingeka ukuba iqhaza. Kuze kube yimanje, amandla unkulunkulukazi magic sigudluke indodana esiqhingini Skyros, lapho egqoke njengoba owesifazane ecashele nokubuthelwa empini phakathi amadodakazi enkosi wendawo Lycomedes, ukwethembana ukuzikhohlisa e ubumsulwa bakhe.
Nokho, maduze nje umholi amaGreki, Agamemnon usefunde ukuphi Achilles futhi Odysseus wambiza. Phambi kwakhe kwakumi isithunywa umsebenzi kunalokho piquant - ukuqaphela damsels abasha lowo wayifihla ngaphansi ingubo yowesifazane azingabaze ubudoda bakhe. Futhi Odysseus babhekana nalo lolungenamaphutsa.
Wazifihla njengendlela umthengisi, wabeka phambi amakhosazana izindwangu zikanokusho, ubucwebe, kanye nezinye izinto ababezohlala lapho abesifazane ebilokhu njalo ubuthakathaka, futhi phakathi kwawo, njengoba ngephutha ke ababesele inkemba. Lapho izinceku nethimba lakhe eshicilelwe ukukhala impi, wonke amantombazane wabaleka ekhala ubumayemaye, futhi kuphela omunye wabo wahlwitha isikhali ngokunikeza umuntu oyiqhawe.
umkhankaso ephelezelwa Rookie e sonke isiqhingi. Abazithobayo walilela King Lycomedes, futhi bakhala izinyembezi nendodakazi Diedamiya, esibelethweni eyinyanga lesithupha kwaba yokuthola amandla indodana baka-Achilles (iqhawe - iqhawe zonke).
Hero of sesabeka kakhulu isitha
Ngaphansi izindonga Troy, Achilles ongafikanga sodwa, kodwa kuhambisane amabutho ayizinkulungwane eziyikhulu ezazithunywe uyise, iNkosi Peleus, ukuguga ophucwa ithuba iqhaza Ukuvinjezelwa komuzi. Waze wanikela ngeNdodana yakhe yezembatho zethu bakhiwa kuye kanye Hephaestus unkulunkulu balidla izakhiwo imilingo. Warrior, namukele kuye, waba esinganqobeki.
Enkondlweni yayo "The Iliad," Homer ekutshela ukuthi, usebenzisa isipho uyise, indodana iminyaka eyisishiyagalolunye alwa, ngokuletha ukwesaba kuya Trojans, futhi athathe edolobheni ngemva kwenye. Ngenxa amandla magic, pha upon him amanzi Styx, kanye zempi kayise, wayengumuntu invulnerable esitheni, kodwa lowo owabulala Achilles ku iThrojani neMpi (kuzoxoxwa ngani ngezansi), wayazi iphuzu lakhe ababuthakathaka, futhi kuze kube isikhathi wasala ithunzi.
Umona, ukuthunjwa ngomphefumulo iqhawe
izenzo abaningi benziwa Achilles, wathola udumo olukhulu phakathi kwamasosha ezivamile futhi kubangelwa umhawu, udliwe kwamasosha umkhuzi wawo e Agamemnon abakhulu. Kuyaziwa ukuthi lo muzwa ongaphakeme ngaso sonke isikhathi ukhuthaza abantu zehlazo, futhi ngezinye izikhathi ngisho nasebugebengwini. Mina yayiphumula nenduna ngesiGreki.
Ngolunye usuku, lapho ebuya kokuseshwa isimiso, Achilles phakathi kwezinye ukukhiqizwa kakhulu bathunjelwe, eyise Chris wayengumpristi ka-Apollo. Agamemnon, sibambe isikhundla sakhe wathatha Achilles wakhe, yena Akazange engqondweni, njengoba yayibizwa kanjalo ngaleso sikhathi umxhwele kwezinye incekukazi Intombazane okuthiwa Briseis.
Ngokushesha umpristi ngeshwa Kwakuthi lapho sezingenile ekamu ngesiGreki wacela indodakazi yakhe ube yisihlengo ocebile, kodwa wenqaba. Ngenxa yokuphelelwa ithemba, wathuma wabiza ngosizo Apollo, yangena isikhundla ezincekukazi zezinceku zayo, wathumela phansi abaphuli indodakazi yakhe esiwumshayabhuqe. Akuwona amaGreki abe nethuba lokumngcwaba abafileyo. Ingabe phakathi kwabo imihlola Kalhant, kokuba babexhumana onkulunkulu, wathi ukufa ngeke emuva phansi kuze Chris uthola indodakazi yakhe, neminikelo Apollo-ocebile.
Agamemnon kwakudingeka alalele, kodwa beziphindiselela, wathatha kude yakhe ayithandayo Briseis Achilles nokuthi ezihlatshelwe ubuNkulunkulu. Abafana meanly bayahlukunyezwa futhi sithukwa ebukhoneni ke amasosha okhonzile. Lesi senzo baba wonke umuntu singalindele abe umholi wokuqala omkhulu babenedumela hhayi abanesibindi kuphela, kodwa futhi ngempela umnumzana. Akungabazeki ukuthi ngeke sekube ngaphandle magic. Ngisho ngaphezulu, kungenzeka ukuthi ukupela okubi phezu kwakhe wathumela phansi nguye owabulala Achilles ekupheleni le nkondlo acoce kithi. Kodwa igama lakhe uzobe umemezele kamuva.
Enganakekile edelelwa wancishwa izinceku zakhe engcono, Achilles wenqaba isazithamela empini kuka Trojans ukuthi kwabajabulisa kakhulu bathuthumela kusukela into efana nayo. Ukuvela lolwandle, wabiza kusuka ekujuleni yayo unina, kolwandle unkulunkulukazi Thetis, futhi wezwa indaba yakhe, wancenga uZeyusi, unkulunkulu ophakeme ukusiza Trojans ukunqoba ibutho Agamemnon futhi bambonise ukuthi ngaphandle Achilles elinda zabo ngoba wayebona ukuthi usezokufa.
Futhi kwenzeka kanjalo. Ihlanganise uZeyusi wanginika amandla le Trojans, baqala okwalapha uchofoze izitha zabo. Le nhlekelele kwakubonakala kuseduze kakhulu, futhi elidumile lutho nomona ukwenza kodwa esidlangalaleni, phambi kwabo bonke labo amasosha efanayo ukuletha Achilles ukuxolisa futhi isinxephezelo ngenxa yokuchitheka Briseis amnike isigqila ezimbalwa ezinhle.
nezigigaba kwakamuva baka-Achilles
Ngemva kwalokhu Achilles magnanimous zithethelelwe lowo okonile ngolaka enkulu nakakhulu waqala raid abavikeli zaleli dolobha. Lesikhatsi lesi esinye nezigigaba yayo eyaziwa kakhulu - ukunqoba umdlalo nge umholi Trojans Hector. Achilles akuyona kuphela ukwazi ukwenza kwakhe ukusebenzisa, kodwa wenza run ezintathu izindonga of Troy, bese kuphela abagwazwe ngomkhonto.
Kodwa onkulunkulu wayengafuni ukwenza Achilles wafakaza ekwindla ka Troy, futhi wathi lokhu kuzosiza iqembu wenziwa umuntu owabulala Achilles. Ngaphambi nje kokufa kwakhe, wenza feat bakhe bokugcina - inqobe Phezu kwebandla Amazons enhle, kodwa ngobuqili futhi okubi, owafika kosizo Trojans, eholwa umholi wabo Penfesileey.
Abalobi basendulo kakhulu kungqubuzane, empilweni baka-Achilles nokho ngazwilinye umfanekiso amahora yakhe yokugcina. Ngokusho lobufakazi babo, usuku olulodwa wazama ukuba singangeni ngenkani emzini ovinjezelwe ngokusebenzisa esangweni zako ezisemqoka. Kungazelelwe, indlela uvinjiwe, akekho omunye ngaphandle Apollo ngokwakhe, hhayi okwamanje wabuyisana amaGreki emva indaba indodakazi ngumpristi wakhe.
Apollo, yebo, ukuthi ubani Achilles. Iqiniso lokuthi, ebekiwe umqhele wenkazimulo enhle wawonkulunkulu, wayenobuhlobo umona okuyihlazo nomhawu maqondana lomuntu ofayo ukuthi, ngicabanga, njengaye, lizinga ubuhle. Mayelana harmfulness lokhu umuzwa ongaphakeme phakathi abantu kakade okukhulunywa ngayo indaba yethu, kulesi simo, baba abebegqoke ngegama ubuNkulunkulu sika.
Achilles lavala imigwaqo kodwa elinde kunjalo ehloniphayo ayokwelashwa, yena esikhundleni wathola ngokukhamuluka luhlaza lokho futhi zisongele ukuba ahlatshwe ngomkhonto, uma kungekhona kanye leli hora uzosusa komgwaqo. Wacasuka Apollo Wagudluka, kodwa kuphela ukuze senze yokuziphindiselela wakhe ngokushesha.
Ngaphezu kwalokho, laba balobi kuhluke nse Encazelweni yalokho okwenzeka. Ngokusho kwenye inguqulo, Apollo yena ake lowo okonile ngemva umcibisholo ebulalayo, futhi nguye owabulala Achilles. Ngakolunye, kungukonakala unguNkulunkulu onomhawu wayala Paris le - indodana yenkosi iThrojani kule ndawo. Kodwa njengoba umcibisholo hit Achilles e endaweni yakhe kuphela sengozini, okuyinto Apollo kuphela uyazi, akungabazeki ukuthi wathumela ezindizayo wakhe. Noma ubani wabulala Achilles esithendeni, ayikwazanga ukwazi izimfihlo zakhe. Ngakho-ke, lo hero ukubulawa isibaluli Apollo - enhle kunazo onkulunkulu, kodwa uhlulekile ukwenza umsebenzi sinqobe imizwa ongaphakeme futhi izinto ezincane.
Umlando Achilles waphefumulela Umthala yezimbongi lasendulo abaye banikezela imisebenzi yabo kuye, ezinye zazo Usufike izinsuku zethu. Abaningi babo kubhekwe ezinhle kunazo zezinkondlo yamaGreki asendulo. Akungabazeki ukuthi udumo kunabo bonke phakathi kwabo Homer wathola inkondlo yakhe edumile ethi "The Iliad." Wabuye wabeletha ukufa baka-Achilles yindlela ethandwayo - "Achilles esithendeni", okubonisa ebuthaka, indawo sengozini.
Bobani Clowns? Clowns eRussia
Mark Katon Umdala: ukuphila nomsebenzi. A indatshana kwezolimo
Ukunyakaza komphakathi ngesikhathi kubusa Nicholas 1: History of Russia
Meliton Kantaria: ibutho elilwayo endleleni hero
Imisebenzi yokuthengisa umsizi. Ukuze uqhubeke futhi umsebenzi search
Imilenze Njengoba benemizimba emincane futhi izibunu some! Akukho lutho impracticable, nje ukwenza-sit-ups nsuku zonke
Yiziphi transistors kwe-circuit
Classicism namaphakathi nezwe. Classicism isitayela emaqaqasini
Lo mdlalo "2048": indlela idlula?
Njengoba ukukhwehlela ingane Soothe: izidakamizwa, izindlela eziphumelelayo kanye nezincomo
Indlela yokuvala i-IP: iseluleko esiwusizo